Farmaajo oo dalbanaya in loo sameeyo muddo kordhin, Saxafiyiinta oo laga hor istaagay in gudaha u galaan golaha shacabka iyo wararkii ugu dambeeyay.. | Weheliye Online
Farmaajo oo dalbanaya in loo sameeyo muddo kordhin, Saxafiyiinta oo laga hor istaagay in gudaha u galaan golaha shacabka iyo wararkii ugu dambeeyay..
Magaalada maanta Muqdisho waxa ka socdo diyaar garowga kulanka Baarlamanka federaalka soomaaliya oo la filayo in uu khudbad la wada sugayo uu ka jeediyo Madaxweyne Maxamed Abdullahi Farmaajo oo goor dhaweed dib ugu laabtay Muqdisho.
Kulanka ay maanta Barlamanka labada guddi ay yeelanayaan ayaa waxa ka maqan gudoonka aqalka sare oo sheegay in uu ka war qabin,waxana xarunta baarlamanka kusii qulqulaya xildhibaanada fadaraalka.
Kulanka ayaa loo diiday saxafiyiiinta in ay galaan xarunta barlamanka ee filla Hargeysa,iyadoo uu amarkaas uu ka yimid Madaxtooyada,waxana socda dood ku aadan sidii saxaafada ay u tabin laheed kulanka maanta.
Kulanka oo uu dalbaday madaxweyne Farmaajo ayaa la ogeyn waxa uu kala hadli doono Barlamanka,Balse dadka taxliiliya siyaasada ayaa sheegaya in uu barlamanka ka dalban doono muddo kororsi oo ay heshiis ku yahiin gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sh.
Losoco waxiii ku soo kordha weheliye News Network
Previous articleHogaamiyaha Mayalka Adag ee Jubbaland oo shir jaraa’id qabtay,Kana hadlay arimo badan oo la xariira shirka Dhuusomareeb.
Next articleDeg-Deg:- xubnihii ka socday Aqalka Sare oo laga saaray kulanka golaha Shacabka, maxey tahay sababta!?